Xafladeeynta Xiritaanka iskuullada ee Kaniisadda oo Dood Kicisay - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Sawirle: Mons Brunius/Scanpix.
Xafladeeynta Xiritaanka iskuullada ee Kaniisadda oo Dood Kicisay
La daabacay fredag 8 juni 2012 kl 09.33
Ma is qabtaan xeerka cusub ee iskuullada iyo in xafladaha xiritaanka iskuullada lagu qabto xarummaha kaniisadda?. Waa is-qabtaan ayuu leeyahay maamulka iskuulladu, haddii howlaha halkaa ka dhacayaa ey masuul ka yihiin ama go'aankeeda leeyihiin maamuleyaasha iskuulladu.
- Waxaan qabnaa in kaniisada oo la tago ay tahay dhaqan adag oo ka hor imaanaynin sharciga oranaya waxbarashado ahaato mid ka madax banaan caqiido. Ayuu yeri Claes-Göaran Aggebo oo hay'ada skolverket kala taliya waxbarashada.
In lagu qabt xafalada xiritaanka iskuullada kaniisada waa dhaqan soo jireen ah inkastoo sharciga iskuulka ee dalkaan yahay mid kamaran caaqiidooyinka. Sharciga cusob ee iskuulka ayey ku xusantahay in in ayaan wax diin ah la soo gelin waxbarida. Xafladdaha xiritaanka iskullka waa lagu qaban karaa kaniisada, lakiin maamulaha iskuulka ayaa leh go'aanka waxa gobtaas laga sheegayo.
- Maamulahu waan in u abaabulaaa xaflada xiritaanka si ay ku dheehantahay caqiido la'aan, ayuu yeri Claes-Göran Aggebo
Qaybo badan oo ka mid ah dalka oo looga dabaaldegayo xiritaanka iskullada ayaa hada iskuulo badan jabinayeen dhaqankaan soo jireenkaa kadib markii ay isku afgaran waayeen arintaan maamulada iskuulada iyo Baadiriyaasha kaniisadaha. Bert Löndahl waa baaderi kaniisadeed waxa uuna aaminsan yahay in qof banaanka ka ah kaniisada uusan go'aanka waxa kaniisada dhexdeeda laga sheegayo lahaan karin.
- Suurtagal mahan in aan diinteena dhexdhexaad ka ahaano, waxaan ahay wadaad katirsan kaniisadaha Sweden. Dhibka waxa weeyan marka si cad la yiraahdo ma ducayn kartid mana baryi kartid ilaah.
Dhaka kale kaniisadaha Sweden ayaa ku eedeeyey hay'ada skolverket in ay u arkaan dhismayaahsa kaniisadaha xaruumo dhexdhexaad ah. Sidaas waxaa shegay Åsa Carmesund oo ah baadiriyed ka howlgasha Kaniisad Hjärsås.
-kaniisado waa xarumaha diinta masiixiyada, waxaa ku dhegan darbiyada sawero masiixi ah,waxaa yaala caalmada masiixigaa iyo ringiyo ku buufsan saxafka kore oo ku xasuusinaya ilaahay. Marka waa qayb ka mid ah masiixiyada.
Lakiin hay'ada skoolverket ayaa sheegtay in sharciga iskuulka uu yahay mid marka laga hadlayo xaflada xiritaanka iskuulka.
Claes.Göran Aggebo ayaa qaba in wax weliba fasirrado kala gadisan laga bixin karo, lakiin boos ugama banaana in baaderigu uu ilahay ilmaha u baryo.